China Ihu igwe na-eme mkpọtụ na mgbatị | Akụrụngwa Chengxin
Igwe ihuenyo elu na ntanetị dị ala bụ ihe ndị ahịa anyị chọrọ. A haziri ma mepụta ihuenyo vibrating site na iji njirimara gbasara ohere. Dika ihe ndi ahia choro na ihe ndi choro ihe omuma, enwere ike kewaa uzo nyocha n'ime uzo ihuenyo, uzo nkpuchi okirikiri na uzo uzo ozo di iche, agaghi agwakọta na igbochi oghere.
Ihe dị iche n’etiti ihu igwe dị elu na ihu igwe jijiji bụ na ọnọdụ nwụnye nke vibrator ahụ dị iche. A na-etinyekarị vibrator na mbadamba abụọ n'akụkụ nke elu nke ihuenyo ahụ, nke a na-akpọ ihuenyo vibrating elu. A na-akpọ vibrator arụnyere n'okpuru etiti ihuenyo ihu igwe dị ala. A na-ejikọ otu usoro nke vibrator site na njikọta ụwa niile. A na-eme ka vibrator jiri mgbanaka labyrinth. Akọrọ mmanụ lubrication.
A na usoro tumadi ekewet nke ihuenyo igbe, eyi na-eguzogide ihuenyo, vibrator na damping mmiri. A na-eji vibrator dị ka isi iyi egwu.
Nke a na usoro nke ihuenyo igwe nwere ezi akara, nnukwu nhazi ikike, ike na inogide, ogologo ọrụ ndụ, na bụ nnọọ adaba maka mmezi na ndozi. Okwesiri maka igwuputa ihe, oku, ihe ulo, ike eletriki, ulo oru ndi ozo na ulo oru ndi ozo, karia na ulo oru ugbo. Ọ bụ a igwe nyocha ọtụtụ ndị na-ejikarị gbawara ọkụ slag, coking osisi na concentrator.
Atụmatụ nke akpaka ntụ ntụ siever:
1. Linear vibrating ihuenyo nwere ezi na inogide imewe, mfe na-arụ ọrụ.
2.Convenientent na ngwa ngwa net na-agbanwe na nhicha.
3.All kọntaktị akụkụ nke ụdị linear vibrating ihuenyo na-mere nke igwe anaghị agba nchara iji hụ na-adị ọcha.
4.Less na-ezighi ezi, mmezi dị mfe na ịrụzi nrụzi.
5.Enwere nhazi nhazi, dayameta nke oghere uzo nwere ike ahaziri dika ihe ndi ahia choro.
Nke gara aga: SZR usoro ọkụ ore vibrating ihuenyo
Osote: Ọganihu vibrating ihuenyo
Okirikiri Vibrating ihuenyo
Dewatering ọma ihuenyo
Nnukwu ihuenyo na-ebugharị oge
In-Line Vibrating ihuenyo
Yk okirikiri Vibrating ihuenyo
ZSL usoro nnukwu oyi ore vibrating ihuenyo
Usoro ZZSM bibiri coal scree